I-GNOME iya kuphucula ujongano lwesixhobo sayo sokubamba | Ubunlog
I-GNOME iya kuphucula ujongano lwesixhobo sayo sokubamba kwaye isixelele ngezinye izinto ezintsha
IPablinux | 16/10/2021 11:32 | gnome, Ubuntu
Kuba ndilandela amanqaku kwi Kule veki kwi-GNOME, Andikhumbuli ukuba iprojekthi ithethile ngento abasebenza kuyo, kodwa namhlanje ewe banazo. Baye baqhubela phambili ukuba bayasebenza ekuphuculeni ujongano lomsebenzisi lwezixhobo zabo zesikrini, kwaye phakathi kotshintsho kukho ii-tweaks kwiimpawu. Kwelinye icala, kwaye ngokunxulumene nesi sixhobo, bazimisele ukutshintsha iindlela ezimfutshane zekhibhodi.
Kwaye, ngokwembonakalo yayo, i-GNOME ijolise ekuphuculeni uyilo lwe desktop yayo. Inkqubo ye- kwiveki ephelile Sele basixelele ngayo ukucofa kwi-libadwaita, kwaye kwiintsuku ezisixhenxe emva koko bayenzile kwakhona ukuba bathi kukho isitayile esitsha sabatyibilikisi, phakathi kwezinye izinto; ngoku zingqukuva kwaye azisangeni kumda weefestile.
Kule veki kwi-GNOME
I-libadwaita ibandakanya isitayile esitsha sokuhambisa imivalo kunye nokwanda komda weradi kwiphepha lesitayile. Imigoqo yokuhambisa ngoku ijikelezwe kwaye ayisancanyathiselwe kumda wefestile, ivumela ukubonwa okungcono kunye notshintsho olugudileyo kurhulumente. Kwakhona, idemo ikwiFlatpak.
Isiseko sedatha yeTracker SPARQL ngoku ibonelela ngemiyalezo yeempazamo eluncedo ngakumbi kubaphuhlisi besicelo ababhala ii-ontologies zabo.
Inguqulelo yophuhliso lweSysprof ibhetele ekufumaneni iifayile ze-debug-info zezicelo zePlppak.
Umhleli wokubhaliweyo ngoku unesikhethi sombala.
Isixhobo sekrini se-GNOME seShell sifumene uphuculo. Iphaneli ngoku ibonisa ii icon ezintle ngokukhetha iindawo, izikrini kunye neefestile. Xa uvula ujongano lomsebenzisi, kuboniswa indawo ekhethwe kwangaphambili enokuthi ngoku irhuqwe kwaye iphinde yenziwe ubungakanani kuyo yonke imikhomba-8, ngelixa ipaneli iphela. Ungazoba indawo entsha ngokubamba iqhosha le Ctrl okanye ngeqhosha lasekunene le mouse. Ukuthimba isikrini akusayi kubamba umkhusane okomzuzwana, njengoko uxinzelelo lwePNG ngoku lusenzeka kumsonto owahlukileyo. Izikrini ezitsha ezibonakala kuqala phantsi kwezinto zamva nje kumphathi wefayile. Ukongeza, izikrini zesikrini se-GNOME kwiimenyu ezivelayo zeShell ngoku zinokuthathwa ngaphandle kokuphazamisa ujongano lomsebenzisi. Kwelinye icala, baya kuphelisa iindlela ezimfutshane zekhibhodi ukuze i-GNOME Shell ilawule ngqo.
I-GWeather ngoku ixhasa usetyenziso lwe-GTK4.
I-Webfont Kit Generator ifakwe kwi-GTK4 kunye ne-libadwaita kunye nokuphuculwa koyilo oluncinci.
I-Solanum ngoku ineesetingi zokumisela ukubala okungafaniyo kwexesha kunye nokuba zingaphi iindawo ezishiyekileyo ngaphambi kwexesha elide.
Umvavanyi weSabelo sokujonga imethadatha ususwe kwincoko yababini eyahlukileyo, kwaye ngoku ikuvumela ukuba uhlole imifanekiso emzimbeni woxwebhu lwakho.
IPika Backup ikhutshelwe kwi-GTK4 kunye ne-libadwaita.
I-Relm4 ngoku ibonelela ngemiyalezo yempazamo, iphucule ii-macros, kwaye yaphucula ngakumbi ukuhlanganiswa ne-libadwaita.
Umahluko uboniswe kwi-GTK4 kunye ne-libadwaita.
Mhle, kunene? Oku bekude kakhulu iveki ebethethe ngayo ngeendaba ezingakumbi, kwaye andazi ukuba yinto ethile okanye into iyaphilisa. Nokuba yeyokugqibela, i-GNOME ayinakuze ilahlekelwe bubuntu bayo, kwaye iya kuqhubeka ilula kwaye iyilwe kakuhle.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ubunlog » Iidesika » gnome » I-GNOME iya kuphucula ujongano lwesixhobo sayo sokubamba kwaye isixelele ngezinye izinto ezintsha
UNatron, inkqubo yokuqokelela kunye nokuhlela ividiyo
Ubuntu Web 20.04.3 Ukuphucula i-Indri iveki ifika kunye / e / kwi-Waydroid